'अरु' जे गर्नू, परिवारको नाक... :: चेतना गुरागाईं :: Setopati
'अरु' जे गर्नू, परिवारको नाक नकाट्नू
केही महिनाअघि मेरै चिनजानको एकजना १५ वर्षे भाइ बाबुबाट चोरेको पैसाले होटलमा'आपत्तिजनक'' क्रियाकलाप गर्दै गरेको अवस्थामा भेटियो।
भर्खरै मात्र सामाजिक संजालमा भाइरल भयो, सिरहामा १६ वर्षकी 'युवती'ले 'यौनकाण्ड'लुकाउन भाइको हत्या गरेको घटना। १४ वर्षका किशोरसँग भैँसी चराउन जाँदा भएको यौन सम्पर्क भाइले देखेपछि घरमा थाहा हुने डरले केटाकेटी दुवै मिलेर उसको हत्या गरेका थिए। प्रहरीले पक्राऊ गरेको केही घण्टामै युवतीले आत्महत्या गरिन्।
यो सङ्क्रमणकाल पचास वर्षअघिका केटाकेटीमा जसरी आउँथ्यो, आजकालका केटाकेटीमा पनि उसैगरी आउँछ। अमेरिकाका केटाकेटीमा जसरी आउँछ, एसिया वा अफ्रिकाका केटाकेटीमा पनि उसैगरी आउँछ। यसबीचमा फरक कहीँ कतै छ भने उत्सुकताको लेभलमा छ। त्यो उत्सुकताको समाधान खोज्ने तरिकामा छ, साधनको उपलब्धतामा छ। उदाहरणका लागि केही वर्षअघिसम्म ट्वाइलेटका भित्ता वा सार्वजनिक बसका सिटपछाडि 'फोहोरी' शब्दहरू लेखेर अभिव्यक्त हुने 'कुरकुरे वैँश' आजभोलि मोबाइलको भित्तामा पोर्न हेरेर फुट्छ। पहिले नन भेज जोक्सले गर्ने काम आजभोलि साइबर सेक्सले गर्छ। ओपन सिक्रेटः इन्टरनेट सबैको सिक्रेट बेस्ट फ्रेण्ड बनेको छ।
कक्षा ९ पढ्दाखेरि मेरी एउटी बहिनीको नियमित महिनावारी हुने समय एक हप्ताभन्दा ज्यादा कट्यो। उसका बुवा बाहिर हुनुहुन्थ्यो। एक साँझ आमाले कपालमा समातेर सोध्नुभो, 'कोसँग गएर नाक काटेर मरिस् भन् त?'
त्यसको केही वर्षपछि अर्की बहिनीको बिहे भयो। एकपटक कुरामा कुरा चल्दा मूर्च्छा परेर हाँस्दै उसले कुरा खोली, उसलाई त ममीले पहिलोचोटि महिनावारी हुनासाथ केटाको 'पिसाब फेर्ने कुरो'लाई छोए मात्र पनि बच्चा रहन्छ भनेर सिकाउनुभएको रहेछ।
आज आफूभन्दा १२ वर्ष जेठा ज्वाँइलाई 'छोएर' उसले जन्माएको छोरो हेर्न जाँदा म आजभन्दा सात वर्षअघि मेरी एउटी साथीले भनेको कुरा घरिघरि सम्झन्छु। उसले मलाई आफ्नी बहिनीको स्कूलमा कक्षा ९ मा पढ्दै गरेका केटीहरूको शारीरिक सम्बन्ध भइसकेको कुरा बताएकी थिई। नौ कक्षा पढ्नु भनेको सरासर पढेमा पन्ध्र वर्ष हुनु हो जबकी हाम्रो ऐनमा १६ वर्ष पूरा नभएकी युवतीसँग उसको सहमतिले नै यौन सम्बन्ध राखे पनि जबरजस्ती करणी ठहर्छ भनिएको छ।
तर हामीले हाम्रा बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई चाहिँ इन्टरनेटको महासागरमा एक्लै छोडिदियौँ। महासागरभित्र अनौठो, लठ्याउने दुनिँया छ र त्यहाँ जे पनि पाइन्छ। ती''जे'' भित्र चाहिने कुरा पनि छन्, नचाहिने कुरा पनि छन् र नजिक जानै नहुने कुरा पनि छन्। तर हाम्रा किशोरकिशोरी भने आफूलाई चाहिने सामग्री के हो भन्नेसम्म पनि जान्दैनन्, किनकी हाम्रो संस्कारको किताबमा यौनको च्याप्टर नै छैन। त्यहाँ सन्तानोत्पादनका प्राविधिक कुरा त छन्, तर आनन्दको बर्जित फलको चर्चा नै छैन। कसैले थपेका छन् भने त्यसले यति मात्र भन्छः अरू जे गर्नू, परिवारको 'नाक काट्ने' काम नगर्नू।
गतवर्ष भारतीय सरकारको मानव स्रोत विकास समितिले किशोर शिक्षा कार्यक्रमबाट''यौन'' भन्ने शब्द हटाउन लगायो। भारतीय जनता पार्टीका एक नेताले नेतृत्व गरेको राज्य सभा समितिले सन् २००९ मा प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टले त स्कुले किताबबाट कण्डमलगायत शरीरका संवेदनशील भागहरू देखाउनबाट पनि रोक लगाएका थियो।
'क्लोज अप'देखि ड्रेस अपसम्म, सिनेमादेखि संविधानसम्ममा भारतीय प्रभाव रहेको हाम्रोजस्तो देशमा सेक्सका मानेमा यसभन्दा फरक र अग्रगामी सोचको आशा गर्नु पनि मूर्खता होला। कक्षा ६ देखि 'किशोरावस्था, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य' आधारभूत पाठ्यक्रमका रूपमा स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षामा समेटिएको त छ, तर यो विषय औँलामा गन्नेजति कक्षाकोठाका भित्ताले मात्र सुन्ने सौभाग्य पाउँछन्।
स्कूल फेरेपछि कक्षा ९ मा सरले 'पछि काम लाग्छ मोरामोरीहो' भन्दै कण्डम प्रयोग गर्ने तरिकादेखि 'विथड्रअल मेथड' सम्म सिकाउँदा कक्षा कहिले हाँसोले मूर्च्छा पर्दथ्यो त कहिले लाजले रातोपिरो हुन्थ्यो। ७ कक्षामा पहिलोचोटि महिनावारी हुँदा रूवाउँदै लुकाउन लगिएकी मैले उहाँकै मुखबाट पहिलोचोटि योनीबाट रगत बग्नुको भरपर्दो कारण सुनेकी थिएँ। तर सर अपवाद हुनुहुन्थ्यो र म भाग्यमानी मात्र थिएँ भन्ने कुरा मलाई बहिनीले लिङ्ग छोएर गर्भवती हुने कुरो गर्दा महशुस भएको थियो।
शारीरिक सम्पर्कपछि सबैभन्दा छिटो दौडने शुक्रकिटले अण्डा भेटेपछि गर्भ रहन्छ भनेर त सरले भन्नुभो तर यो भनिदिनुभएन, सेक्स बच्चा जन्माउनको लागि मात्रै थियो भने कण्डमको आविष्कार किन भयो? किन मानिसलाई संगिनी सुई र कपर टि चाहियो? किन खुले कोठीहरू, जहाँ गर्भ रहनासाथ 'करियर'को 'दि एण्ड' हुन्छ? सरले प्रजनन् शिक्षा त दिनुभो, यौन शिक्षा चाहिँ कतै छुटाउनुभो। वा दिन चाहनुभएन। वा सक्नुभएन।
आज यसै लेखमार्फत सोध्न मन छ, 'सर, आजकालका मान्छे त एउटा वा दुईटाबाहेक बच्चा जन्माउनै चाहँदैनन्, फेरि पनि उनीहरू सेक्स गर्छन्, किन?'
गटम्याचर इन्स्टिच्युटले गरेको एक खोजका अनुसार अमेरिकाका १८/१९ वर्षे किशोरकिशोरीहरूमध्ये ४१ प्रतिशत मात्र कण्डमका बारेमा थोरबहुत जान्दछन् भने ४५ प्रतिशतलाई गर्भनिरोधकका उपायबारे केही पनि थाहा छैन। किशोरावस्थामा गर्भवती नहुने र यौनजन्य रोगहरूबाट टाढै बस्ने एकमात्र उपायको रूपमा 'एब्सटिनेन्स' लाई लिइनु नै अमेरिका यौनजन्य क्रियाकलापबाट सर्ने रोगहरू र किशोरावस्था जन्मदरमा अरू औद्योगिक मुलुकहरूभन्दा अगाडि हुनुको कारण मानिन्छ।
कारण अर्को पनि छ, त्यो हो, ९० प्रतिशत बाबुआमाहरूले 'एब्सटिनेन्स' नै आफ्ना छोराछोरीको स्वास्थ्य र भविष्यको लागि उपयुक्त उपाय हो भन्ठान्नू। तर यी समस्याबाट बच्न न त 'एब्सटिनेन्स' ले न त शारिरीक सम्पर्कमा सहभागी हुने उमेरले नै खासै महत्व राख्छ। डेली इन्फोग्राफिकका अनुसार यौनका लागि सम्मतिको कानुनी उमेर १३ मात्र भएको स्पेनमा प्रत्येक हजार किशोरीहरुमध्ये ११.९५ प्रतिशत मात्रै किशोरावस्थामा गर्भवती भएको रेकर्ड छ भने उही कानुनी उमेर भएको अर्जेन्टिनामा यो दर ५६.५५ प्रतिशत छ। यौनका लागि सम्मतिको कानुनी उमेर १३ र १८ दुवै (प्रदेशअनुसार फरक) भएको जापानमा यो दर घटेर ४.७५ प्रतिशत मात्रै छ। यसका पछाडिको एकमात्र कारण हो, यी देशमा दिइने यौन शिक्षाको गुणस्तर र गर्भनिरोधक साधनहरूको उपलब्धता।
सेक्स शब्दको प्रयोगबिनै सेक्स एजुकेशन दिने नीति ल्याएको केही समयपछि नै भारतीय सरकारले राष्ट्रिय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत 'साथियां सलाह' भन्ने मोबाइल एप लन्च गरेर आफूलाई आलोचना गर्नेहरूलाई चकित पारिदियो। 'साथियां' भन्ने रिसोर्स किटसँगै आएको यस एपले किशोरकिशोरीका यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न प्रश्नको उत्तर दिन किशोरकिशोरीलाई नै परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसअन्तर्गत भारतका करीब २६ करोड किशोरकिशोरीहरूका यौन जिज्ञाशालाई सम्बोधन गर्न डेढ लाख किशोरकिशोरीहरूलाई तालिम दिएर तयार पारिँदैछ।
केही महिना अघि मात्रै नेपालमा पनि 'खुल्दुली' भन्ने यस्तै किसिमको मोबाइल एप सार्वजनिक गरिएको रहेछ भन्ने मैले यसै लेखका लागि तयारी गर्दै गर्दा थाहा पाएँ। मोबाइल र इन्टरनेटको दुनिँयामा रमाउने किशोरकिशोरीलाई मोबाइलकै माध्यमबाट कुरा बुझाउनु पक्कै पनि सिर्जनशील उपाय हो। तर कति किशोरकिशोरीलाई यो एपको बारेमा थाहा छ, कतिको पहुँच छ र कतिले साँच्चिकै प्रयोग गरेर लाभ लिएका छन् भन्ने प्रश्न अझ बढी महत्वपूर्ण हो।
योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हामी अबको यौनशिक्षा कसरी अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छौँ भन्ने हो। घरको एउटा कुनामा बसेर छोराले लिङ्गको आकारको यौन सन्तुष्टिसँग लेनादेना हुन्छ कि हुँदैन भनेर मोबाइलसित सोधोस् भन्ने चाहन्छौँ कि बाबुले छोरालाई'तिम्री आमासित कसरी भेट भयो' भनेर सुनाउँदासुनाउँदै सेक्स एजुकेशन कतै घुसाइदेओस् भन्ने चाहन्छौँ, त्यो हाम्रो कुरा हो।
हाम्रो काम उनीहरूलाई यौनका कुरा गर्नबाटै रोक्ने होइन। त्यो गर्न सकिन्न पनि। तर हामी उनीहरूलाई यौन समाजले भन्ने गरेजस्तो 'फोहोरी' पनि हैन भनेर संझाउन सक्छौँ। इन्टरनेटको महासागरमा पौडी खेल्न जानुअघि उनीहरूको लाइफ ज्याकेट हामी आफैँ बन्न सक्छौँ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ७, २०७४, १८:४९:०८